सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । एकातर्फ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने घोषणा गर्दै गर्दा ती पर्यटकका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार विस्तार भयो या भएन, मुख्य प्रश्न हो । त्यसो त सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । दुई वर्षको अन्तरालमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने चुनौती पनि छ । कतिपयले भ्रमण वर्ष घोषणालाई सरकारको महत्वाकांक्षी योजना भनिरहेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतको हिस्सा अग्रणी छ भने चीन र अमेरिकाबाट पनि पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ । हिजोका दिनमा नेपालमा पर्यटक सन्तोषजनक रूपमा आउने देशबाट अझ बढाउनुपर्ने र नयाँ क्षेत्रको खोजी पनि गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले नेपालमा पर्यटक आउन रुचाउँछन् पनि, तर ती पर्यटकका लागि उचित सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायी सुरज वैद्यलाई यस अभियानको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । २०७४ साउन २९ गते नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने घोषणा भएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो अभियान सफल बनाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट के–कस्ता तयारी भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा कारोकारकर्मी सरस्वती ढकाल र दीपेन्द्र थापाले सरोकारवाला पक्षसँग गरेको कुराकानीको सार :
स्मार्ट बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ
उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान)
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य घोषणा गरेको छ, तर हामी अहिले नै देशभरका होटल, लज तथा होमस्टेसहित गरी यो क्षमता धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौं । यसै वर्ष पनि २० लाख पर्यटक नेपाल आउने हो भने होटलतर्फको सेवा दिन हामी सक्छौँ । पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसले पनि पर्यटक आगमनमा अवश्य टेवा पुग्ने नै छ । पर्यटकले आफ्नो समयको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै समय होटलमै बिताउँछन् । होटलको पूर्वाधार विकास, समयसापेक्ष दिनुपर्ने सेवा तथा प्रविधिका विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । एकपटक नेपाल आउने पर्यटकलाई जतिसक्यो नेपालमा बस्ने वातावरण बनाउने, आरोहणका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने, उनीहरूलाई नेपालमा रहँदासम्म बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सकियो भने हाम्रो बजारीकरण उनीहरूबाट पनि हुन्छ । भ्रमण वर्ष मनाउने भनिरहँदा आजका दिनसम्म के–कस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेर तालिका बनाउन सकिएको छैन । जनवरीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भइसकेपछि हरेक महिना के–कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हानकै १५-१६ च्याप्टर छन्, उनीहरू अहिले पनि स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । सरकारले व्यवसायीको जिम्मेवारीका विषयमा प्रस्ट्याइदिनु जरुरी छ । नत्र भोलिका दिनमा अलमलमै समय जान्छ, हाम्रो लक्ष्य सफल हुन सक्दैन । भ्रमण वर्षमा होटल व्यवसायी, ट्रेकिङ व्यवसायी मात्र नभएर ट्याक्सी चालक, बसका सहचालकलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ । त्यसैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले इमानदार भएर काम गर्न सकियो भने सरकारको लक्ष्य सफल हुन्छ नै, त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि निकै सकारात्मक बन्नेछ । सडक क्षेत्रमा धेरै कमी–कमजोरी छन्, नगरकोट जाने सडक अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । उता बौद्ध–जोरपाटी सडकको अवस्था लाजमर्दाे नै छ । यस्तो बाटोबाट कसरी पर्यटक ओहोर–दोहोर गराउने ? बाटोले देशको अवस्थाको चित्रण गर्छ, त्यसैले सडक सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । बजारीकरणको पाटोमा मानिसको व्यस्त जीवनशैलीलाई ध्यान दिएर मोबाइल एप्स बनाउनुपर्छ । अब टेलिभिजन हेरेर बस्ने फुर्सद कमै मानिसलाई हुन्छ, त्यसैले स्मार्ट बजारीकरण गर्नुपर्छ ।
‘नाइस’ कार्यक्रम भ्रमण वर्षको आकर्षण बन्नेछ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्यासिफिक एसियन ट्राभल मार्ट नेपाल च्याप्टर (पाटा)
सरकारले २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना सार्वजनिक गर्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा हो । पर्यटन क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका लागि टेवा दिन सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्दै गर्दा यो क्षेत्रमा भएका सम्भावना पनि खोज्नु जरुरी छ । जति सम्भावना पर्यटन क्षेत्रमा छन्, हामीले त्यसलाई लिन सकेका छैनौँ । पहिलो त हामीसँग पूर्वाधारका सवालमा धेरै कमी–कमजोरी छन् । अप्ठ्यारो परिस्थिति नै भए पनि कम्तीमा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा थोरै भए पनि प्रगति हात पर्छ । पूर्वाधारको पर्याप्त विकास गर्ने हो भने नेपालजस्तो देशका लागि २० लाख पर्यटक भित्र्याउन एक वर्षको समय पनि कुर्नु पर्दैन । पर्यटकले पहिलो पटक पाइला टेक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सुधार गर्नु जरुरी छ । भनिन्छ नि, ‘फस्र्ट इप्रेसन इन दि लास्ट इम्प्रेसन टू ।’ त्यसैले विमानस्थलको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । हामीले पर्यटकलाई सकारात्मक सन्देश दिनका लागि टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी स्वागत गर्ने, नेपालका बारेमा सकारात्मक जानकारी गराउने काम गर्नेछौँ । यसका लागि भिजिन नेपालसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ । अहिले विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिने काम भएको छ । बुटिक एयरपोर्ट भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भनिएको छ, तर वास्तवमा बुटिक एयारपोर्ट हुन आवश्यकताहरू पूरा भएका छन् त ? भिजिट नेपालमा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने भनिए पनि लामो दूरीका यात्रु लक्षित होइनन् । भारत र चीनलगायत आसपासका देशबाट नै नेपालमा धेरै पर्यटक आएका छन् तिनैलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा सेवा–सुविधा र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले पनि चीन र भारतलाई लक्षित गरेर ‘नाइस’ अर्थात् नेपाल इन्डिया चीन एक्स्पो गर्दैछौँ । २०२० को फेब्रुअरीमा कार्यक्रम गर्ने प्रारम्भिक तयारी भइसकेको छ । यो कार्यक्रममा त्रिपक्षीय देशहरू सहभागी हुने गरी पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य छ । भिजिट नेपालमा केही नयाँपन दिनु जरुरी छ । त्यसका साथै भिजिट नेपाल–२०२० का साथै त्यसअगावै रिसर्चका कामहरू हुनेछन्, जसले पर्यटन क्षेत्रमा के छ र के–कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने वास्तविकता चित्रण गर्नेछ ।
गुणस्तरीय पर्यटकमा जोड दिनुपर्छ
प्रबन्ध निर्देशक, बुद्ध एयर
सरकारले योजना तथा नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कसरी कहाँबाट कुन तरिकाले कति पर्यटक ल्याउने हो, सो बारेमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारले लक्ष्य लिनुपर्छ । २० लाख पर्यटक ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, पर्यटकले गर्ने खर्च हामीले बढाउन सक्नुपर्छ ।
पर्यटकको संख्यामा वार्षिक रूपमा वृद्धि भए पनि पर्यटकले गर्ने खर्चमा भने वृद्धि हुन सकेको छैन । भ्रमण वर्ष मनाउने त सरकारको लक्ष्य छँदैछ, तर गुणस्तरीय पर्यटक ल्याएर राष्ट्रको आम्दानी वृद्धि र विदेशी मुद्रा कति आर्जन भयो त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अर्कातिर भने वर्षभरि नै पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन । संख्या वृद्धि गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । पर्यटक ल्याएर पर्यटकबाट आउने आम्दानीले राजस्वमा वृद्धि हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल आउने सबै विदेशी नागरिकलाई पर्यटक नै मान्ने कि पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न पर्यटकलाई पर्यटक मान्ने ? यसमा पनि बहस हुनु जरुरी छ ।
यस विषयमा सरकोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ । पर्यटकीय सिजनबाहेकका महिनामा पनि पर्यटक ल्याउने वातावरण सरकारले विकास गर्नुपर्छ । पर्यटकलाई इन्गेज गर्ने गन्तव्यहरूको विकास पनि सरकारले गर्दै लानुपर्छ । हाल सीमित रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि बढाउने अवधारणा विकास गरेर पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्नुपर्छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा जानका लागि सहज वातावरण छैन । सडक सुधार भएको छैन । जोमसोम, नगरकोटलगायतका क्षेत्रमा पर्यटक जानका लागि समस्या छन् । काठमाडौंभित्र धूलो व्याप्त छ । सडक विस्तार गरी पर्यटकका लागि यात्रा सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसरी सरकारले दीर्घकालीन सोच, नीति योजना खाकासहित गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । थोरै आए पनि गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकेको खण्डमा राष्ट्र र पर्यटक उद्योगलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा दुई देशबीच सिधा हवाई मार्गले जोड्छ भने टिकट पनि सस्तो भएर पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । आधुनिक प्रचार प्रसारको माध्यम (डिजिटल) को प्रयोग गरेर नेपालमा पर्यटक आउने सम्भाव्यता भएका मुलुकहरूमा सरकारले प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै प्रचार–प्रसार गरी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पर्यटनमैत्री बनाउनुपर्छ ।
बुद्ध एयरले पनि नेपालमा पर्यटक वृद्धि गर्नका लागि वनारसमा र कोलकातामा उडान गरिरहेको छ । बुद्धले नेपाल आउने प्याकेज नै सस्तो बनाएर सोसल मिडिया, पत्रपत्रिका र अन्य माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि अपेक्षिकृत सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । यसमा हामी अध्ययन–अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छौं ।
सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ
हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० का लागि २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेका छौं । जुन मुलुकबाट पर्यटक आगमन नेपालमा बढाउन सकिन्छ, त्यहीं हाम्रो प्रचारप्रसार केन्द्रित गरेका छौं । मूलतः मुख्य पर्यटन स्रोत भएका मुलुकमा हामीले बढी जोड दिएका छौं । बढीजस्तो छिमेकी मुलुकमा डिजिटल प्रचार–प्रचार केन्द्रित गरेका छौं । प्रचार–प्रसारमा हामी केन्द्रित छौं । चीन, भारत, लन्डनलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रचार–प्रसारमा केन्द्रित गराएर हामीले नेपालको भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरहेका छौं । डिजिटल मार्केटिङबाट पर्यटकीय बजारमा बोर्डले नेपाल भ्रमण गर्न पे्ररित गर्ने सामग्री राखेका छौं । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मूलतः यस वर्षको डिसेम्बरमा त्रिभुवन विमानस्थलको मर्मत–सम्भार सकिएपछि चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आउँछ । नयाँ विमान कम्पनीले उडान अनुमति लिएसँगै पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन्छ । अर्कातर्फ भने सन् २०१९ भित्रै भैरहवा विमानस्थल निर्माण सकेर सन् २०२० को सुरुबाट विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यसले पनि पर्यटकीय गतिविधि बढाउने आशा राखेका छौं । बोर्डले अर्कातर्फ बेमौसमी सिजनमा पनि पर्यटकको आगमन बढाउनका लागि विभिन्न एक्टिभिटिज गरिरहेका छौं । यसले पनि पर्यटकको दरमा वृद्धि हुने नै छ ।
पूर्वाधारको विकास हुँदै जानु र सरकारले विमानस्थलमा राति अवतरण गर्न विमानलाई पार्किङ र ल्यान्डिङमा केही सहुलियत दिएको खण्डमा पनि एयरलाइन्सहरू आकर्षित हुनेछन् । हवाई इन्धन नेपालमा महँगो भयो भनिरहेका बेला सरकारले यसमा केही हेरफेर गर्ने संकेत गरेको छ । यसले पनि एयरलाइन्सहरू आकर्षित गर्ने विश्वास लिएको छ । यसले गर्दा हवाई कनेक्टिभिटी बढेर जाने र पर्यटक आगमनमा पनि वृद्धि हुनेछ । धेरै विमान कम्पनीले नेपालमा उडान अवतरण गर्न थालेपछि नेपाल आउने टिकटको मूल्यमा समेत कमी आउनेछ । यो भएसँगै हाल धेरै महँगो भएर नआएका पर्यटकका लागि नेपाल आउने बाटो खुल्नेछ । हामीले गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनुमा नै जोड दिएका छौं । पर्यटक आएसँगै पर्यटकबाट हुने आम्दानी पनि वृद्धि भएको छ । डिजिटल माध्यमबाट गरिने पेमेन्टका कारण पर्यटकको खर्च घटेको देखिएको हो । सरकारले लिएको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मा २० लाख पर्यटक आउनेमा हामी ढुक्क छौं, बोर्डले सोही मार्ग निर्देशनमा रहेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउने सावर्जनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गरिरहेको छ । अर्कातर्फ सरकारले गठन गरेको भ्रमण वर्ष–२०२० को सचिवालयले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ ।